Inkampani yezimonyo iJOYO ingumqambi nomenzi wemikhiqizo yobungcweti yobungcweti. Besilokhu sisebenzisana nezinye izinkampani zezimonyo ezidumile nabaculi bezimonyo abangochwepheshe kusukela ngo-2005.
Imikhiqizo ye-Makeup ifaka i-Professional Makeup Palettes, amasethi we-Professional Makeup Brush. Imininingwane yemikhiqizo yi-Eye shadow, Blush, Lip Gloss, Lipsticks, Powder Loose, Concealers, HD Liquid Foundation, Oil Free Liquid Foundation, Mascara, Eyebrow Powder, Liquid Eyeliner, Cake Eyeliner, Pearl Eye shadow, Sealers, Eyeshadow Primer, Makeup I-Remover, i-Bronzer, i-Compact, i-Powered Powder ne-Shimmer Powder njll. Izinkulungwane zabaculi bezimonyo zobungcweti bazisebenzisa kumamodeli wazo, ziyanelisa ngemibala emihle ekhonjisiwe ekuthatheni izithombe. Siyazethemba ukukuqinisekisa ngezimonyo ezisezingeni eliphakeme nezintengo zokuncintisana.
IMIKHIQIZO KAKHULU: Uma ufuna ukuthengisa imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye-HIGHT, imikhiqizo yethu iyona engcono kakhulu ongayikhetha. Singakhiqiza izimonyo ngokwezicelo zakho.
Uma uqala nje ibhizinisi lakho endaweni yezimonyo, noma ufuna ukwakha owakho umkhiqizo, singaphrinta uphawu lwakho noma umkhiqizo kwimikhiqizo yethu.
IMISEBENZI ENGCONO KAKHULU: Sinesipiliyoni esiningi sokukuhlelela ukukhiqiza nokuklama kwakho. Singakuhlelela ukuthunyelwa kwakho. Ukuphela kokwenzayo ukufaka i-oda bese uhlela ukukhokha bese ulinda ukufika kwezimpahla. Ngakho-ke, ungathola izimonyo ngokuphepha.
Uma udinga ukuthi sikusekele ekuqaleni, sizokwenza konke okusemandleni ethu ukukusiza. Ngakho-ke, ungafinyelela umgomo wakho ngesikhathi esifushane.
Wamukelekile ukwakha ubudlelwano bebhizinisi nobungane ne-Beautydom. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Silangazelela ukuthola uphenyo lwakho. Asinankinga nokuthi nje sanibonani njengabangane!
JOYO © Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe, I-Matte Eyeshadow Palette, I-Lipstick ekhanyayo, Igolide Lamehlo, I-Mini Lipstick, Amabhulashi we-Makeup ahamba phambili, Khipha ku-internet Cream Eyeshadow, Yonke Imikhiqizo